Famatsiana herinaratra :: Miteraka ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo ny olana teknika • AoRaha
Famatsiana herinaratra Miteraka ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo ny olana teknika
Nihaino ny fitarainan’ ny mpanjifa. Niatoato ny fahatapahan-jiro tato anatin’ ny andro vitsivitsy izay. Nitondra fanazavana ny eo anivon’ny minisiteran’ nyRano, ny angovo ary ny Akoran’afo fa tsy manana olana amin’ny famokarana ny Jirama fa lafiny teknika no mahatonga ny fahatapahan- jiro, amin’izao fotoana izao.
“Noho ny ezaky ny rehetra dia tsy misy intsony ny delestazy ekonomika. Olana teknika no miteraka fahatapahan-jiro eto Antananarivo fa tsy delestazy vokatry ny tsy fahampian’ ny solika intsony satria efa nampitomboina ny tahirin-tsolika ampiasain’ny Jirama amin’ny famokarana herinaratra”, hoy ny minisitra Andriamanga Vonjy, omaly, nandritra ny fidinana ifotony tetsy amin’ny masoivohon’ny Jirama, etsy Soanierana.
Mikasika ny any amin’ ny faritany kosa dia efa mametraka fepetra hanafoanana ny delestazy ny minisitera, saingy vonjimaika ihany aloha izany. Vahaolana maharitra nolazain’ny minisitra ny fanorenana tobim-pamokarana mandeha amin’ ny angovo azo havaozina.
Nasiany teny ihany koa ny mikasika ny fitokonan’ ny sendikan’ny mpiasa. Efa nisy fihaonana indroa miantoana, hoy izy, saingy tsy tonga nanatrika izany foana ny ampahany amin’ ireo sendika misy eto anivon’ny orinasa. “Araka ny hitantsika eto dia tsy eo ireo sendika na dia misy andian’olona vitsivitsy ihany aza tazana eto. Zon’ny mpiasa ny manao fitokonana saingy tsy fotoanany izao. Izahay, ny Jirama, ny
fanjakana sy ny mpamatsy solika ary ny mpanjifa dia tokony hiara-hiasa mba hanampiana ny Jirama. Mijanona ho mpanelanelana ny disadisa misy hatrany anefa ny minisitera», hoy izy.
Nandritra ity fitsidihana ity no nijerena ny fandehan’ ny asa andavanandro eo anivon’ny orinasa Jirama, izay andry lehibe iankinan’ ny angovo sy ny rano. Nisy ny resadresaka nifanaovany tamin’ny mpiasa mikasika ny pôlitika ankapoben’ny orinasa.
Fampivoarana ifotony :: Haverina eny an-tsekoly avokoa ny ankizivavy niala an-daharana